काठमाडौँमा विप्लबका कार्यकर्ता देखेपछी प्रधानमन्त्रीको फोन प्रचण्डलाई !,के भयो कुराकानी ? – www.agnijwala.com
काठमाडौँमा विप्लबका कार्यकर्ता देखेपछी प्रधानमन्त्रीको फोन प्रचण्डलाई !,के भयो कुराकानी ?
९ मङ्सिर काठमाडौँ। नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लब) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विशाल जनसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त जनसभामा देशभरीबाट ५० औं हजारको हाराहारीमा जनताको उपस्थिति भएको थियो ।
कार्यक्रम काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको दृश्य हेर्दा कुनैबेला प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले गरेका ठुलाठुला सार्वजनिक कार्यक्रममा जसरी जनता उपस्थित हुन्थे । त्यो भन्दा कुनै कमी थिएन ।
यो कार्यक्रमको झलकले नेपालको राजधानी बिप्लबमय भएको भन्दै चोकचोकमा ,गल्ली ,गल्लीमा सुन्न पाईन्थ्यो । यो दृश्य देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आत्तिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलिले बिप्लबको कार्यक्रमको बारेमा चासो राख्दा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले दिएको रिपोर्टिङबाट आत्तिएर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले समयमै बिप्लबको पार्टीको बारेमा समाधानको उपाय खोजिएन भने भयानक संकट पर्ने देखिन्छ । भन्दै प्रचण्डलाई भनेका थिए ।
भृकुटीमण्डपमा भएको बिशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै बिप्लब नेकपाका स्थायी समिती सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता खड्क बहादुर बिश्वकर्मा, प्रकाण्डले अहिलेको सत्ता नेपाली जनताको नभै सामाजिक दलाल पुजीपतीको भएको बताएका थिए ।
आफ्नै राजनीतिक अधिकार र आफ्नै सत्ता नभएसम्म जनताले कुनैपनी किसिमको सुख अनुभुती गर्न नसक्ने बताएका थिए । यसको लागि जनता तयार भएको जिकिर गरेका थिए ।